စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှ ရတနာများခိုးယူ သွားသူ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား (၂)ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိ
သင်္ကြန်စာ ’’ဒီနှစ်သိကြားမင်း ဘာစီးပြီး ဆင်းသလဲ’’
လိပ်တိုက်ကျေးရွာတွင် မီးကြွင်းမီးကျန်မှ တစ်ဆင် မီးလောင်ရာ အိမ်(၁၇)လုံး ပြာကျ
ထောင်ချခံရသည့် DVBသတင်းထောက် လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်
မြင်သမျှ .. ကြားသမျှ
ယုဇနပလာဇာရှိ ဝေဒီဖိနပ်ဆိုင်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
NLD ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေး သမ္မတ ဖြစ်သွားနိုင်သော သမ္မတရွေးချယ်ပွဲ – လင်းထိုက် (Y.I.T)
ခရစ်ယာန်နဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူသုံးဆယ် သေဆုံး
passwords ပြောင်းပစ်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အကြံပေး
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၀ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊(၇)ရပ်ကွက်၊ပြည်လမ်းနှင့် ကျွန်တောလမ်းကြား Junction Square စင်တာရှိ မန်နေဂျာ ဒေါ်မျိုးမမလွင်၏ Rose Mary စိန်ရွှေရတနာဆိုင်၌ နိုင်ငံခြားသားဟုယူဆရသော ကုလားအမျိုးသား(၂)ဦးမှ စိန်ထည်ပစ္စည်းများကြည့်ရှုကာမ၀ယ်ဘဲထွက်သွားစဉ် အသဲပုံစိန်လော့ကတ် (၁)ခု၊ ကာလ တန်ဘိုးငွေကျပ် (၁၁၈၀၀၀၀၀)နှင့် မိုးစက်ပုံစိန်လေ့ကတ်(၁)ခု၊ ကာလတန်ဘိုးငွေကျပ် (၉၆၃၀၀၀၀)ခန့်တို့ခိုးယူသွားသဖြင့် ကမာရွတ်မြို့မ
Posted: 10 Apr 2014 04:48 AM PDT
’’ဒီနှစ်သိကြားမင်း ဘာစီးပြီး ဆင်းသလဲ’’ ဆိုသည့် အမေးမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကာလများက သင်္ကြန်ရက်တွေ နီးလာတိုင်း ကြားရစမြဲ။ သိကြားမင်းက သတ္တ ၀ါတစ်ကောင်ကောင်ကို စီးမည်။ ဥပမာ-ကျွဲ၊ နွား၊ ဘီလူးစသဖြင့် ပေါ့။ နောက် လက်တစ်ဖက်စီ တွင် အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီကို ကိုင်၍ လူ့ပြည်သို့ဆင်းမည်။ သိကြားမင်း စီးလာသည့် အရာနှင့် ကိုင်လာသော ပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ သည် နှစ်တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေက ဘယ်လို ဘယ်ဝါဖြစ်မည်ဆိုသည်ကိုေ
Posted: 10 Apr 2014 04:30 AM PDT
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မကွေးခရိုင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ပရပ်ကြယ်ရဲစခန်းပိုင် ဆတ်သွားရဲစခန်း တောင်ဘက် (၁၅)မိုင်ခန့်အကွာ လိပ်တိုက်အုပ်စု၊ လိပ်တိုက်ကျေးရွာတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ - ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက် နံနက် (၉း၃၀)အချိန် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပရပ်ကြယ်ရဲစခန်းပိုင် လိပ်တိုက်ကျေးရွာရှိ ကိုသန်းမင်းဌေး (၂၀)နှစ် (ဘ)ဦးစိုးဝင်း တောင်သူ၏ သုံးပင်အိမ်ြေ
သမီးကလေးကျေးရွာကနေ အဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရတဲ့ ရွာသားတွေအတွက် နယ်စပ်နေ ပြည်သူတွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က ယာယီဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနေပါတယ်။ နေအိမ်တွေ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ လှည်းကူးမြို့နယ် သမီးကလေးကျေးရွာက ဒေသခံတွေကို ဒီကေဘီအေ ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က မြ၀တီကျောက်ခတ်ကျေးရွာမှာ နေစရာပေးခဲ့ပြီးနောက် ရွာသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပြင်ပအကူအညီတွေ
Posted: 10 Apr 2014 04:13 AM PDT
စစ်တွေ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ ကူညီရေးအဖွဲ့များ တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတက ဖွဲ့စည်းထားသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရာတွင် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ကြိုတင်ရှောင်ရှားပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွင် အမှန်တကယ်ပါဝင် ခဲ့သူများကို မဖော်ထုတ်ဘဲ ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို မဇ္ဈိမက လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ဧပြီ ၉ ရက် ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံပိုင် သတင်းများမှတစ်ဆင့်
Posted: 10 Apr 2014 04:08 AM PDT
ကြာသာပတေးနေ့၊ ဧပြီ ၁၀ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။ ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ မကွေးမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ကျခံရန် အမိန့်ချခံရသည့် Democratic voice of Burma (DVB)မှ နယ်သတင်းထောက် ကိုဇော်သက်ဖေ (ခ) သူရသက်တင်ကို ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရန် ရည်ရွယ်ကာ DVB မှ သတင်းထောက်များ ဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားတွင် ဧပြီလ ၁၀ရက်က ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆုတောင်းပွဲပါ သတင်းထောက်များက “ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး
မူးကြရူးကြပေါ့ ဘယ်တိုင်း ဘယ်နိုင်ငံမှ ရှိပုံမရပါဘူး။ နွေခေါင်ခေါင်မှာ နှစ်သစ်ကူးတာမျိုးပါ။ ကျွန်တော် သိသမျှ တိုင်းပြည် အတော် များများဟာ အေးချမ်း လှသော ဆောင်းရာသီလို အချိန် မျိုးမှာ နှစ်သစ်ကူးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကတော့ ထူးခြားစွာပဲ နွေခေါင်ခေါင်မှာ ပူပူလောင်လောင် အရက်တွေသောက်ပြီး တားမြစ်ထား တဲ့ ရေ ကိုပ က်ပြီးမှ နှစ်ကူးပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာက အခြားအချိန်တွေမှာ
Posted: 10 Apr 2014 03:49 AM PDT
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ပေါ်နဲ့ တရုတ်နယ်စပ်ဘက်မှာ တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်က ရာနဲ့ချီတဲ့ ရွာသားတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတယ်လို့ နမ့်ခမ်း ကျားဖြူ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းဆိုင်ဝမ်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် မံစီမြို့နယ် မန်ဇန့်ကျေးရွာအနီး လွယ်ဟိုဆေတောင်ဘက်မှာ ဧပြီလ ၁၀ ရက် မနက် ၈ နာရီကနေ ညနေ ၂ နာရီကျော်ထိ ကေအိုင်အေ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ အစိုးရတပ်ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး
Posted: 10 Apr 2014 03:46 AM PDT
သင်္ကြန်ကာလတွင် မူးယစ်သောက်စားထားသည့် ယာဉ်မောင်းများကို ချလန်ဖြတ်အရေးယူခြင်းအစား စခန်းတွင်းခေါ်ယူထိန်းသိမ်းသည့် စနစ်ကို ယခုနှစ်တွင် ပြုလုပ် မည်ဟု နေပြည်တော်ရှိ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ ယာဉ်ပေါ်ပါ သင်္ကြန်ပျော်ပါးသူများနှင့် လမ်းသွား လမ်းလာပြည်သူများ အဆိုပါယာဉ်မောင်းကြောင့် ယာဉ် အန္တရာ ယ်မဖြစ်စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ် ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းခံရသည့် သူကို စိတ်ချရသည့် အနေအထားရှိမှသာ လွှတ်ပေးမည်ဟု အဆိုပါ
Posted: 09 Apr 2014 10:06 PM PDT
ယနေ့နံနက် ၉နာရီ ၅ မိနစ်ခန့်တွင် ယုဇနပလာဇာရှိ ဝေဒီဖိနပ်ဆိုင်တွင် ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဈေးသူ ဈေးသားများ အလန့်တကြား ပြေးဆင်း ခဲ့ကြသည်။ မိနစ် ၃၀ နီးပါခန့် အကြာတွင် Air Con gas ပေါက်ကွဲမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း ဈေးအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့က ကြောငြာခဲ့သည်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဆိုင်၏နောက်ဘက်ရှိ မှန်တခါးချပ်အချို့ ပေါက်ကွဲထွက်ခဲ့သည်။ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိခြင်း မရှိသော်လည်း ပထမထပ် တစ်ထပ်လုံး gas အနံ့များနှင့်
Posted: 09 Apr 2014 09:54 PM PDT
စစ်တွေမြို့ NGO များတိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ စစ်တွေထောင်ထဲတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဓည၀တီရပ်ကွက်မှ ကိုနိုင်စိုး ဖခင် ဦးမောင်သိန်းမှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ပြီး အချိန်အကြာကြီး သတိလစ်နေသဖြင့် စစ်တွေမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အရေးပေါ်လူနာအဖြစ် ရွှေ့ပြောင်းကုသထားရကြောင်း သိရသည်။ အသက်(၅၉)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ဦးမောင်သိန်းမှာ ဆေးရုံရောက်ပြီး(၃)ရက်မြောက်သည်အထိ သတိပြန်မရသေးသည့်အတွက် မနေ့က ညည့်အချိန်မှာ
ချစ်သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်လိုက်သူ မိန်းကလေးအချို့ တိုးတက်လာ သည့် နည်းပညာခေတ်တွင် ဂုဏ် သိက္ခာအရ အသုံးချခံခဲ့ရသော ဖြစ်စဉ်များ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာပါ သည်။ မိန်းကလေးငယ်အချို့ ချစ်သူအမျိုးသားအပေါ် ယုံကြည် မှုလွန်ကဲမိခြင်းနှင့် နည်းပညာကို တလွဲအသုံးချသော အမျိုးသား အချို့၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် သက် ဆိုင်သူနှစ်ဦးသာ သိထားသည့် လျှို့ဝှက်အပ်သော နေထိုင်မှုပုံစံ များသည် Online စာမျက်နှာများ ပေါ်သို့
Posted: 09 Apr 2014 09:32 PM PDT
ကေအိုင်အေမှ စစ်သားစုဆောင်းသည် ဟုဆိုကာ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် အောင်မြေ(၁) ကျေးရွာရှိ အိမ်တွင် အိပ်နေသော အမျိုးသမီးကို လယ်ကွင်ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သားမယားပြုကျင့်ခဲ့သည့် လူငယ်လေးဦးထဲမှ နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ပြီး၊ ကျန်နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိရန် ဆက်လက်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ သတင်းရရှိသည်။ ‘‘တရားခံတွေက ကေအိုင်အေမဟုတ်ပါဘူး’’ဟု ၀ိုင်းမော် မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ
Posted: 09 Apr 2014 09:22 PM PDT
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ (၈) နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့ နယ်၊ အရှေ့ခြမ်းတောင်ပေါ်ကျေးရွာ ပြည်ထောင်ကိုးအုပ်စု၊ သန်း ခေါင်စာ ရင်း ကောက် ယူရာတွင် ဦး ဆောင်ပါဝင်သူ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင် ကိုးအုပ်စု စာရေး(၁)အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်သူ ဦးအောင်ကျော် ဆန်းသည် ဒေသခံကရင်/ဗုဒ္ဓပြည် သူများကို ကယန်းလူမျိုး ပြောင်းထည့်ရန် ခြိမ်းခြောက်လျက် ရှိသည် ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။ ကယန်းလူမျိုးပြောင်းမထည့် ပါက
Posted: 09 Apr 2014 09:13 PM PDT
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရှာဖွေနေကြတဲ့ ပျောက်ဆုံးမလေးလေယာဉ်ကနေ ထုတ်လွှတ်တဲ့ အသံလို့ ယူဆရတဲ့ အချက်ပေးမှုကို သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်အောက် အတော်နက်နက်ကနေ ထပ်ပြီး ကြားနေရတာမို့ လေယာဉ်ကို မကြာခင်မှာပဲ တွေ့နိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိလာနေပြီလို့ ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ Angus Houston က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစောပိုင်းမှာ အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ ရှာဖွေစက် pinger locator က လေယာဉ်ရဲ့ black box က ထုတ်လွှတ်တဲ့ အချက်ပေးသံ ၂
Posted: 09 Apr 2014 09:10 PM PDT
မြန်မာအစိုးရရဲ့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့လနှောင်းပိုင်းတုန်းက ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အကူညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ရုံးခန်းတွေ၊ နေအိမ်တွေ၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့မှုအပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာအစိုးရက ဝေဖန်ပြစ်တင် ရှုံ့ချလိုက်ပြီးတော့
Posted: 09 Apr 2014 09:06 PM PDT
၂၀၁၃ ခုနှစ် အတာသင်္ကြန် ကာလအတွင်း အချို့သော အမျိုးသမီးငယ်များမှာ မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ အ၀တ်များကိုပင် ချွတ်၍ ရေကစားခြင်းများ၊ ရှိသင့်ရှိအပ် ၀တ်သင့်ဝတ်အပ်သည့် အတွင်းခံ အ၀တ်စားများပင် ၀တ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲ မဏ္ဍပ်များပေါ်၌ ရေကစားခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ . . . ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၃ မကြာခင် ကျရောက်မည့် မြန်မာအတာသင်္ကြန် ပွဲတော်အတွင်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်း မြတ်နိုးတတ်သော အများပြည်သူတို့၏ အမြင်အာရုံကို
Posted: 09 Apr 2014 08:59 PM PDT
NLD ပါတီအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ညီညွတ်ရေးဗျူဟာ တည်ဆောက်မှု အားနည်းနေချိန်တွင် အဆိုပါ မိန့်ခွန်းများ၌ တိုင်းရင်းသားများ သဘောခွေ့မည့် စကားရပ်များ ပါဝင်နေသည်မှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တင်ကြိုစည်းရုံးခြင်း ဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင် . . . ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်မှာလား ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး (အထူးသဖြင့် ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မ ၅၉ (ဃ) (စ)) ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများ နိုင်ငံအ၀န်းကျယ် ကျယ်ြ
ဗဟိုအာဖရိက သမ္မတ နိုင်ငံမှာ လက်နက်ကိုင် အုပ်စုကွဲတွေကြား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူသုံးဆယ် သေဆုံးပြီး ဆယ်ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ရဲက ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Dekoa မြို့မှာ အရပ်သား အများစုဟာ တိုက်ခိုက်မှု အတွင်း ပစ်ခတ်ကြတဲ့ ကျည်ဆန်တွေထိမှန်သေဆုံးခဲ့တာလို့ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ အဂါနေ့တုန်းက မွတ်ဆလင် အများစု ပါဝင်တဲ့ ဆယ်လီခါ သူပုန်တွေ ထိန်းချုပ်ရာ ဒက်ခါ မြို့ကို ဘာလာခါ ဆန့်ကျင်တဲ့
Posted: 09 Apr 2014 08:33 PM PDT
ကမ္ဘာတလွှားက ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ passwords ပြောင်းပစ်ဖို့ အင်တာနက် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အကြံပေးထားပါတယ်။ သိန်းသန်းချီတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေက သုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာ လည်ပတ်ရေး စံနစ် OpenSSL ထဲမှာ Heartbleed လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးတမျိုးကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ Heartbleed ကနေ သူများတကာရဲ့ ကွန်ပြူတာ လုံခြုံရေး စံနစ်ထဲ ခိုးဝင်သူ Hacker တွေက ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေ ဖြစ်တဲ့
Posted: 09 Apr 2014 08:28 PM PDT
အမေရိကန် သမ္မတအိုဘားမား ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အခုလာမယ့် နိုဝင်္ဘာလအတွင်း သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်။ နယူးယောက်မြို့မှာ အင်္ဂါနေ့က ကျင်းပတဲ့ (Asia Society Policy Institute) အာရှလူ့ဘောင်မူဝါဒသိပ္ပံ တရားဝင် စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ အခမ်းအနားမှာ အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး William Burns က လာ မယ့် ဆောင်းဦး ရာသီမှာ သမ္မတအိုဘားမားဟာ APEC ခေါ် အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသ စီးပွါးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ
Posted: 09 Apr 2014 08:26 PM PDT
မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ရက်များ အတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှ အခြားတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များသို့ ပြေးဆွဲနေသည့် ခရီးသည်မော် တော်ယာဉ်လိုင်းများ အချင်းချင်း ခိုက်ရန်မဖြစ်ပွားရေး၊ သတ်မှတ် စည်းကမ်းအတိုင်း စနစ်တကျ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာပြေးဆွဲရေး၊ ယာဉ်စီးလက်မှတ်များ မသမာ သောနည်းလမ်းဖြင့် ကြိုတင်ဖြတ် ထားခြင်းနှင့် ခရီးသွားပြည်သူများ အပေါ် ဈေးနှုန်းပိုမိုတောင်းယူမှု မပြုလုပ်ရေးအတွက် အောင် မင်္ဂလာနှင့် ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး
Posted: 09 Apr 2014 01:51 PM PDT
လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာ သူရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မှာ သူကိုယ်တိုင်ပဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေက သူ့အတွက် မဲဆွယ်ပေးတာမျိုး လုပ်ဆောင်ခွင့်မပေးတဲ့ ညွှန်ကြားချက် တစောင်ထုတ်ဖို့ ပြန်ဆင်နေတယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးက တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး ကလည်း သူ့ရဲ့
Posted: 09 Apr 2014 01:49 PM PDT
တိုယိုတာ ကုမ္ပဏီက ကား အစင်းရေ ၆ သန်းခွဲ နီးပါးကို လုံခြုံရေး စိတ်မချရလို့ ကားတွေ ပြန်အပ်ပေးဖို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြန်ပြန်သိမ်းရတဲ့ ကားတွေထဲ အခုအကြိမ်က အရေအတွက် အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်အပ်ရမယ့် ကားတွေက Yuris, Urban Cruiser, RAV4 နဲ့ Hilux Model ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ကားတိုက်မိရင် လေအိတ်မပွင့်တာ အပါအဝင် စတီယာရင် မကောင်းတာ၊ ထိုင်ခုံ မကောင်းတာ စတဲ့ ချိုယွင်းချက် တွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted: 09 Apr 2014 01:47 PM PDT
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု လယ်ပြင်ကျေးရွာမှာ မနေ့ညနေပိုင်းက တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာတဲ့ ကျောက်စိမ်းကား ၁၁ စီးကို တပ်မ ၆၆ လက်အောက်ခံ ခလရ ၃၅ တပ်ရင်းက ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီကျောက်စိမ်းကား ၁၁ စီးကို ပိုင်ရှင်မဲ့အဖြစ် ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီး အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက
Posted by lu bo at 8:06 AM